မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ နဲ့ ပတျသကျပွီး မျောရငျဟို ပွောခဲ့တဲ့ အမှနျတရား ရ ခကျြ - SPORTS MYANMAR
မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ နဲ့ ပတျသကျပွီး မျောရငျဟို ပွောခဲ့တဲ့ အမှနျတရား ရ ခကျြ
မနျခကျြ စတာ ယူနိုကျ တကျ ဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ နှဈ ဒီဇငျဘာ က ဟို ဆေး မျောရငျဟို ကို ထုတျပယျ ခဲ့ ပါတယျ ။ ပျေါတူဂီ နညျးပွ ကွီး ဟာ မနျခကျြ စတာ ယူနိုကျတကျ ကို စတငျ ရောကျရှိ တဲ့ နှဈ မှာ ယူရိုပါ လိဂျ နဲ့ လိဂျ ဖလား တို့ ကို ရယူပွီး အသငျး ကို အောငျမွငျမှု လမျးကွောငျးပျေါ တဖနျ ပွနျလညျ ဆှဲတငျ ပေးမယျ့သူ လို့ အားလုံးက ထငျမှတျ ခဲ့ကွ ပါတယျ ။
ဒုတိယ မွောကျ ရာသီ မှာ အဆငျ့ ၂ နဲ့ ရာသီ ပိတျသိမျး နိုငျ ခဲ့ ပမေယျ့ ခနျြပီယံ မနျစီးတီး နဲ့ စံခြိနျတငျ အမှတျ တှေ ကှာခဲ့ တဲ့ အပွငျ ကစားပုံ မကောငျး ခွငျး ၊ အသငျး သား အခြို့ ကို လူသိ ရှငျကွား ဝဖေနျ ခွငျးတှကွေောငျ့ မျောရငျဟို အပျေါ အလိုမကြ သူတှေ တဖွညျးဖွညျး မြားပွား လာခဲ့ကာ တတိယမွောကျ ရာသီ အလယျ မှာ ထုတျပယျ ခံလိုကျရတယျ ဆိုတာကို ဘောလုံး ပရိသတျ အားလုံး သိရှိခဲ့ပွီ ဖွဈ ပါတယျ ။
မျောရငျဟို ဟာ မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ နညျးပွ အဖွဈ ရှိနေ ခဲ့စဉျ အတှငျး အသငျးသား အတျောမြားမြား ကို လူသိ ရှငျကွား ပွငျးပွငျး ထနျထနျ ဝဖေနျ မှု တှေ ရှိ ခဲ့ပွီး သူ့ရဲ့ ခြီးကြုးမှု ကို ရရှိတဲ့ ကစား သမား ဟာ လကျခြိုးရတှေကျ ရလောကျ အောငျ နညျးပါး ခဲ့ ပါတယျ ။
ဒါ့အပွငျ သူ့ရဲ့ ယူနိုကျတကျ နညျးပွ ဘဝ ဒုတိယ မွောကျ ရာသီ မှာ အဆငျ့ ၂ နဲ့ ပိတျသိမျးနိုငျခဲ့ မှု ဟာ သူ့ရဲ့ အကောငျးဆုံး အောငျမွငျမှုတှေ ထဲက တဈခု ပါလို့ ပွောဆို ခဲ့မှု အပျေါလညျး လှောငျရယျခဲ့ကွ ပါတယျ ။ ဒါပမေယျ့ အခုတော့ ဘယျသူမှ မျောရငျဟို ပွောဆို ခဲ့တာတှေ နဲ့ ပတျသကျပွီး မလှောငျပွောငျနိုငျတော့ ပါဘူး ။ ဘာဖွဈလို့ လညျး ဆိုတော့ မျောရငျဟို ပွောခဲ့တာတှေ ထဲက အတျောမြားမြား ဟာ မှနျနခေဲ့လို့ ပါပဲ ။
၁ ။ ဒုတိယ နရောနဲ့ ရာသီ ပိတျသိမျးနိုငျမှု ဟာ မဟာအောငျပှဲ ဟုပွောဆိုခွငျး
အငျတာမီလနျ နဲ့ ခနျြပီယံ လိဂျ အပါ အဝငျ တဈရာသီ အတှငျး ဖလား ၃ လုံး ၊ ပျေါတို နဲ့ ခနျြပီယံ လိဂျ ၊ ခြဲလျဆီး ကို ၂ ခါ ကိုငျတှယျပွီး အမှတျပေး ခနျြပီယံဆုတှေ ရယူပေး ခဲ့သူ တဈဦး က အမှတျပေး ဇယား ရဲ့ အဆငျ့ ၂ နရော နဲ့ ပိတျသိမျး နိုငျမှု ဟာ ကွီးမားတဲ့ အောငျပှဲ လို့ ဆိုလာခဲ့ ပါတယျ ။ ဒါကို ဘောလုံး ပရိသတျ တှေ ၊ ဝဖေနျသူတှေ က လှောငျပွောငျ အပွဈတငျ ခဲ့ကွ ပါတယျ ။
ဒါပမေယျ့ မျောရငျဟို ကတော့ သူ့ရဲ့ စကားဟာ မှနျကနျ တယျဆိုတာ ကို အပွညျ့အဝ ယုံကွညျကွောငျး နဲ့ နောကျကှယျ မှာ ဘာတှေ ဖွဈခဲ့တယျ ဆိုတာ ကို ဘယျသူမှ မသိကွောငျး တုနျ့ပွနျပွောဆို ခဲ့ ပါတယျ ။ အခု အခြိနျ မှာတော့ ဒီလူတှေ နဲ့ အာဆငျနယျ ၊ လီဗာပူး ၊ စပါး ၊ ခြဲလျဆီး တို့ရဲ့ အထကျ မှာ ရပျတညျ နိုငျတဲ့ တာ ဟာ တကယျပွောငျမွောကျတဲ့ စှမျးဆောငျရညျ ဖွဈတယျဆိုတာ ကို အားလုံး နီးပါး လကျခံ သှားကွပွီဖွဈ ပါတယျ ။
၂ ။ တျောမီနေး ကို နရောပေးခဲ့ခွငျး
သူ့ရဲ့ ဒုတိယ မွောကျ ရာသီ မှာ မျောရငျဟို ဟာ အကယျ ဒမီ ကှငျးလယျ ကစား သမား တဈဦး ကို မိတျဆကျ ပေးခဲ့ ပါတယျ ။ သူကတော့ မကျ တျောမီနေး ပါ ။ လူငယျတှေ ကို နရောပေးလေ့ သိပျ မရှိတဲ့ မျောရငျဟို ဟာ တျောမီနေး ကို တော့ ပှဲ အတျောမြားမြား ပှဲထှကျ အသုံးပွု ခဲ့သလို ခွစှေမျး မပွနိုငျတိုငျး လိုလို မှာလညျး ကာကှယျ ပေးခဲ့ ပါတယျ ။
မျောရငျဟို ဟာ တျောမီနေး ကို ၂၀၁၈ အတှကျ အကောငျးဆုံး မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ ကစား သမား ( သူ တဈဦးတညျး အမွငျ ) အဖွဈ သတျမှတျ ခဲ့သလို အနာဂါတျ မှာ လညျး ထှနျးတောကျမယျ့သူ အဖွဈ ပွောဆို ခဲ့ ပါတယျ ။ မျောရငျဟို မရှိတော့ ခြိနျ မှာတော့ တျောမီနေး ဟာ ယူနိုကျတကျ ကှငျးလယျရဲ့ အားထားရတဲ့ ကစား သမား တဈဦး ဖွဈလာ ခဲ့ပွီး ခွစှေမျး မှာသာ မက ခေါငျးဆောငျမှု အပိုငျးမှာပါ အလားအလာ ကောငျးတှေ ရှိနတေဲ့ သူ တဈဦး အဖွဈ သိသာ မွငျသာ စလောခဲ့ ပါတယျ ။
၃ ။ ရကျဖိုဒျ့ ဟာ အထောငျတိုကျစဈမှုး မဟုတျဘူး
လူကာကူ ကို ပှဲထှကျ ခှငျ့တှေ ပေးနေ ခဲ့ပွီး ရကျဖိုဒျ့ ကို ခေါကျထားတဲ့ အတှကျ ယူနိုကျတကျ ဂန်ထဝငျ တှေ နဲ့ ပရိသတျတှကေ မျောရငျဟို အပျေါ ဒေါသူပုနျ ထခဲ့ကွ ပါတယျ ။ မျောရငျဟို နရောကို ဆကျခံ တဲ့ ဆိုးရှား က မားကပျ ရကျဖိုဒျ့ ဟာ သူ့ရဲ့ ဦးစားပေး ပှဲထှကျ တိုကျစဈမှုး ဖွဈတယျလို့ ကွငွော ခဲ့စဉျ မှာ ၀မျးသာ ခဲ့တဲ့သူတှေ အမြားအပွား ရှိခဲ့ မှာပါ ။
ဒါပမေယျ့ ဒီတဈခု မှာလညျး မျောရငျဟို မှနျခဲ့ပွနျ ပါတယျ ။ ရကျဖိုဒျ့ ဟာ နယူးကာဆယျ ကို ၁ – ၀ နဲ့ ရှုံးနိမျ့ ခဲ့တဲ့ ပှဲမှာ ၂ ဖကျ အသငျး ဂိုး သမားတှေ ထကျပငျ ဘောလုံး ထိတှမှေု့ အကွိမျ နညျးခဲ့ ပါတယျ ။ လြှငျမွနျတဲ့ ပွေးနှုနျး တဈခု သာ ပိုငျဆိုငျ ထားတဲ့ မားကပျ ရကျဖိုဒျ့ ဟာ အထောငျတိုကျစဈမှုး ဖွဈဖို့ သငျယူ စရာတှေ လိုအပျ နသေေးတယျ ဆိုတာ ထကျ အထောငျတိုကျစဈမှုး တဈဦး ဖွဈဖို့ မသငျ့တျောဘူးဆိုတဲ့ အတှေးတှေ ကို ယူနိုကျတကျ ပရိသတျတှေ စတငျ ခံစားမိလာခဲ့ပါပွီ ။
၄ ။ ပါရဲရား အပျေါ ဝဖေနျခွငျး
ယူနိုကျတကျ နညျးပွ ဖွဈလာခြိနျ မှာ ဆိုးရှား လုပျပေး ရမယျ့ တာဝနျ ၂ ခု ရှိ ပါတယျ ။ တဈခု က တဈခြိနျတုနျးက အောငျမွငျ ခဲ့တဲ့ တိုကျစဈ အသားပေး ကစားပုံ ကို ပွနျလညျ ဖျောဆောငျဖို့ နဲ့ ဆာအဲလကျဈ တုနျးကလို လူငယျတှေ ကို နရောပေးဖို့ပါ ။ ဒီ အတှကျ ဆိုးရှား ရှေးခယျြ ခဲ့တဲ့ သူတှေ ထဲ မှာ ဘရာဇီး ကှငျးလယျလူ အနျဒရေ ပါရဲရား ပါဝငျ ခဲ့ ပါတယျ ။ ဒါပမေယျ့ မျောရငျဟို ကတော့ ပါရဲရား ကို သဘောမတှခေဲ့ ပါဘူး ။
ဘရာဇီးသားလေး ဟာ မျောရငျဟို ရဲ့ ပထမဆုံး ၂ ရာသီ မှာ ဂရနျနာဒါ ၊ ဗလငျစီယာ အသငျးတှေ ဆီ အငှား ထှကျ ကစားခဲ့ရ ပါတယျ ။ ဒါ့အပွငျ ပါရဲရား ဟာ ယူနိုကျတကျ မှ ယူနိုကျတကျ ဆိုတဲ့ စိတျဓါတျ နဲ့ ခံယူခကျြမြိုး ရှိမနကွေောငျး လညျး မျောရငျဟို က ဝဖေနျခဲ့ သလို သူတောငျးဆို နတေဲ့ ပှဲထှကျခှငျ့ နဲ့လညျး ထိုကျတနျ မှု မရှိဘူးလို့ ပွောဆို ခဲ့ ပါတယျ ။ ပရိသတျတှေ က တော့ ပါရဲရား . . . ပါရဲရား နဲ့ အျောဟဈ နခေဲ့ ပါတယျ ။ အခု တော့ ဒီအသံတှေ တိတျသှားခဲ့ ပါပွီ ။
၅ ။ ပေါ့ဘာ ဟာ ယုံကွညျကိုးစားရတဲ့ သူ မဟုတျ ၊ သူဟာ “Virus” ဖွဈတယျ
ဆောကျသမျတနျ နဲ့ သရကြေ ခဲ့တဲ့ ပှဲ ဟာ မျောရငျဟို ယူနိုကျတကျ ကို မစှနျ့ခှာခှငျ ရကျ အနညျးငယျ အလို မှာ ဖွဈခဲ့ တာပါ ။ ဒီပှဲ အပွီးမှာ ကှငျးလယျလူ ပေါလျ ပေါ့ဘာ ကို ဗိုငျးရပျဈ တဈကောငျ ဖွဈပွီး အနီးအနားက လူတှကေို ကူးစကျစတေတျ သူ လို့ မျောရငျဟို သုံးနှုနျး ဝဖေနျ ခဲ့ ပါတယျ ။ အသငျး အတှငျး မှာ ပေါ့ဘာ – မျောရငျဟို အားပွိုငျမှုတှေ ကွီးထှား လာခဲ့ပွီး ကလပျ ဘကျက ပေါ့ဘာ ကို ရှေးခယျြ ကာ မျောရငျဟို ကို ထုတျပယျ ခဲ့ ပါတယျ ။ အခု သူတို့ မှားသှားမှနျး သဘောပေါကျ နလေောကျ ပါပွီ ။
ပွငျသဈ ကစား သမား ဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ နှရောသီ တုနျးက ရီးရဲ မကျဒရဈ နဲ့ သတငျး အကွီးအကယျြ ထှကျခဲ့ပွီး တရားဝငျ ဖှငျ့ဟ ပွောမသှားလငျ့ကစား အေးဂငျြ့ နဲ့ မိသားစုဝငျတှေ ရဲ့ လုပျရပျတှေ ကို ကွညျ့ခွငျး အားဖွငျ့ ပေါ့ဘာ ဟာ ရီးရဲ ကို ပွောငျးခငျြနခေဲ့တာ ကို သိသာ စခေဲ့ ပါတယျ ။ ဒီရာသီ မှာ လညျး အဖှငျ့ ပှဲစဉျ မှာ သာ ပုံစံ ကောငျး ရခဲ့ပွီး ကနျြတဲ့ ပှဲတှေ မှာ ပေါ့ဘာ ဆီက ပေါ့ဘာ ဆနျတဲ့ ခွစှေမျးတှေ ကို မမွငျတှခေဲ့ရ ပါဘူး ။
လကျရှိ အခြိနျ မှာတော့ မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ ဟာ အဆငျ့ ၁၂ ကို ရောကျနပွေီး ဒါဟာ ကမ်ဘာ့ ဖလား ခနျြပီယံ အသငျးသား တဈယောကျ အတှကျ အသငျးပွောငျးခှငျ့ တောငျးခံ ဖို့ လုံလောကျတဲ့ အခကျြ ဖွဈလာ နိုငျ ပါတယျ ။ ဒီလိုတှေ ဖွဈလာအောငျ ပေါ့ဘာ ကွံစညျခဲ့သလား ဆိုတာ သူကိုယျတိုငျပဲ သိနိုငျ မှာပါ ။ သခြောတာ ကတော့ မျောရငျဟို မှနျခဲ့ပွနျ တာပါပဲ ။
၆ ။ ခံစဈကို ထောကျပွခဲ့ခွငျး
ကမ်ဘာ့ အဆငျ့ ခံစဈ သမား တဈဦး ကို ချေါယူ ပေးဖို့ ဒုတိယ မွောကျ ရာသီ အကုနျမှာ မျောရငျဟို တောငျးဆို ခဲ့ ပါတယျ ။ နှရောသီ တဈလြောကျလုံး အယျဒါဝီရယျ ၊ ကူလီဘာလေ ၊ မကျဂှဲယား ၊ ဘိုတနျ ၊ စကရီနီယာ စတဲ့ နာမညျကြျောတှေ နဲ့ သတငျးထှကျ ခဲ့ပွီး တဈယောကျ မှ ရောကျမလာခဲ့ ပါဘူး ။ မျောရငျဟို လကျထကျ ယူနိုကျတကျ အသငျးမှာ ဂြုံးဈ ၊ ဘိုငျလီ ၊ စမောလငျး ၊ ရိုဟို ၊ လငျဒီလော့ဖျ တို့ ဟာ ခံစဈမှုး ၂ နရော အတှကျ အရှေးခံခဲ့ရ ပါတယျ ။ ဒါပမေယျ့ လငျဒီလော့ဖျ က လှဲရငျ မျောရငျဟို စိတျတိုငျးကသြူ မရှိခဲ့ ပါဘူး ။
ဒီရာသီမှာတော့ မျောရငျဟို အသညျးအသနျ တောငျးဆိုခဲ့တဲ့ စာရငျး ထဲ က ဟယျရီ မကျဂှဲယား ကို ယူနိုကျတကျ တို့ ချေါယူ ပေးခဲ့သလို ပဲလစျေ့ နောကျခံလူ ဘဈဆာကာ ကို လညျး ချေါယူ ပေးခဲ့ ပါတယျ ။ ဒါပမေယျ့ ခံစဈ ကစားပုံ ကောငျးတဲ့ နညျးပွ မရှိတော့တဲ့ နောကျမှာတော့ ယူနိုကျတကျ ရဲ့ ခံစဈ ဟာ အမှား အယှငျး တှေ နဲ့ ဂိုးတှေ ပေးနခေဲ့ရ ပါတယျ ။ ဒီ နောကျတနျးနဲ့ သာ မျောရငျဟို ကို ပေးကိုငျလိုကျရငျ ဆိုတဲ့ အတှေးတှေ လညျး ၀ငျနေ သူတှေ ရှိနေ မှာ ပါ ။
၇ ။ ဆိုးရှား ဟာ ရုပျသေးရုပျ လို့ ပွောဆိုခဲ့ခွငျး
“ကြှနျတျော က သဘောကောငျးတဲ့ နညျးပွ မဖွဈခငျြ ပါဘူး ။ သဘောကောငျးတဲ့ သူ ဟာ ကွိုးဆှဲ ခံရတတျ ပါတယျ” ဆိုတဲ့ စကား ဟာ မျောရငျဟို လကျထဲ ကနေ ယူနိုကျတကျ ကို လှဲယူ ခဲ့တဲ့ ဆိုးရှား တဈယောကျ အစ ကောငျးခဲ့ ပမေယျ့ နောကျဆုံး ၁၀ ပှဲ မှာ ၆ ပှဲထိ ရှုံးနိမျ့ကာ အဆငျ့ ရ နဲ့ ရာသီ ပိတျသိမျး အပွီး မှာ ပွောဆို ခဲ့တဲ့ စကား ဖွဈ ပါတယျ ။
ဆိုးရှား ဟာ ယူနိုကျတကျ ပရိသတျတှေ အတှကျ ကယျတငျရှငျ တဈဦး ၊ အသငျးရဲ့ ဖှဲ့စညျးပုံ နဲ့ နှလုံး ၀ိဉာဉျ တှေ ကို သိနားလညျ တဲ့ ဂန်ထဝငျ တဈဦး ၊ တဈခြိနျတုနျးက အောငျမွငျမှု တှေ နဲ့ လူငယျ စီမံကိနျးတှေ ကို ဖျောဆောငျပေး မယျ့သူ တဈဦး အဖွဈ ထငျခဲ့ ပမေယျ့ တကယျတနျး မှာတော့ ဆိုးရှား ဟာ အသငျး အမှုဆောငျ အကျဝုဒျဝကျ ရဲ့ ကွိုးဆှဲရာ ကရတဲ့ ရုပျသေး ရုပျတဈခု လို ဖွဈနေ ခဲ့ ပါတယျ ။
ဒါကို ဆိုးရှား ကိုယျတိုငျ ၀နျခံမှာ မဟုတျပမေယျ့ အသငျး က သူ့အပျေါ လုပျဆောငျ ပေးခဲ့တာတှေ ၊ သူ့ အပျေါ ပွောဆို ကာကှယျ ပေးနတော တှေ ၊ ဆိုးရှား ရဲ့ ပှဲအပွီး ပွောစကားတှေ ကို ပွနျပွီး သုံးသပျကွညျ့မယျ ဆိုရငျ သဘောကောငျးတဲ့ နျောဝသေား ဟာ ကစား သမား တှေ ကို မလှမျးမိုး နိုငျသလို ဘုတျအဖှဲ့ နဲ့ အမှုဆောငျ တို့ ကို လညျး ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ပွောဆို နိုငျခွငျး မရှိ လောကျတာကို ရိပျစားမိ နိုငျ ပါတယျ ။ ဒီတဈခု ကလညျး မျောရငျဟို မှနျခဲ့ ပွနျတာပါပဲ ။
နိုငျငံ တကာ ပှဲစဉျတှေ အပွီး မှာတော့ မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ ဟာ လီဗာပူး နဲ့ ရငျဆိုငျ ရမှာပါ ။ ဒီရာသီ မှာ ၈ ပှဲ ကစား ၊ ၈ ပှဲလုံး နိုငျထားတဲ့ လီဗာပူး ကို အပွတျ အသတျ ရှုံးနိမျ့ မယျလို့ အတျော မြားမြားက တှေးထငျ ယုံကွညျ ထားကွပါပွီ ။ မနှဈတုနျးက လီဗာပူး ကို ရှုံးပွီး မျောရငျဟို ထုတျခံ ခဲ့ရသလို ဒီနှဈ မှာလညျး ဆိုးရှား ထုတျခံ ရမယျလို့ ရပေနျး စားနခေဲ့ပွနျ ပါပွီ ။
မျောရငျဟို ကတော့ မခြိပွုံး ပဲ ပွုံး နမေလား ၊ အိမျက တီဗှီ ကို ကွညျ့ပွီး ၀မျးနညျးနေ မလား ၊ လှောငျရယျ နမေလား ဆိုတာတော့ သူကိုယျတိုငျပဲ သိနိုငျ မှာပါ . . .
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် နဲ့ ပတ်သက်ပြီး မော်ရင်ဟို ပြောခဲ့တဲ့ အမှန်တရား ၇ ချက်
မန်ချက် စတာ ယူနိုက် တက် ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ် ဒီဇင်ဘာ က ဟို ဆေး မော်ရင်ဟို ကို ထုတ်ပယ် ခဲ့ ပါတယ် ။ ပေါ်တူဂီ နည်းပြ ကြီး ဟာ မန်ချက် စတာ ယူနိုက်တက် ကို စတင် ရောက်ရှိ တဲ့ နှစ် မှာ ယူရိုပါ လိဂ် နဲ့ လိဂ် ဖလား တို့ ကို ရယူပြီး အသင်း ကို အောင်မြင်မှု လမ်းကြောင်းပေါ် တဖန် ပြန်လည် ဆွဲတင် ပေးမယ့်သူ လို့ အားလုံးက ထင်မှတ် ခဲ့ကြ ပါတယ် ။
ဒုတိယ မြောက် ရာသီ မှာ အဆင့် ၂ နဲ့ ရာသီ ပိတ်သိမ်း နိုင် ခဲ့ ပေမယ့် ချန်ပီယံ မန်စီးတီး နဲ့ စံချိန်တင် အမှတ် တွေ ကွာခဲ့ တဲ့ အပြင် ကစားပုံ မကောင်း ခြင်း ၊ အသင်း သား အချို့ ကို လူသိ ရှင်ကြား ဝေဖန် ခြင်းတွေကြောင့် မော်ရင်ဟို အပေါ် အလိုမကျ သူတွေ တဖြည်းဖြည်း များပြား လာခဲ့ကာ တတိယမြောက် ရာသီ အလယ် မှာ ထုတ်ပယ် ခံလိုက်ရတယ် ဆိုတာကို ဘောလုံး ပရိသတ် အားလုံး သိရှိခဲ့ပြီ ဖြစ် ပါတယ် ။
မော်ရင်ဟို ဟာ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် နည်းပြ အဖြစ် ရှိနေ ခဲ့စဉ် အတွင်း အသင်းသား အတော်များများ ကို လူသိ ရှင်ကြား ပြင်းပြင်း ထန်ထန် ဝေဖန် မှု တွေ ရှိ ခဲ့ပြီး သူ့ရဲ့ ချီးကျုးမှု ကို ရရှိတဲ့ ကစား သမား ဟာ လက်ချိုးရေတွက် ရလောက် အောင် နည်းပါး ခဲ့ ပါတယ် ။
ဒါ့အပြင် သူ့ရဲ့ ယူနိုက်တက် နည်းပြ ဘ၀ ဒုတိယ မြောက် ရာသီ မှာ အဆင့် ၂ နဲ့ ပိတ်သိမ်းနိုင်ခဲ့ မှု ဟာ သူ့ရဲ့ အကောင်းဆုံး အောင်မြင်မှုတွေ ထဲက တစ်ခု ပါလို့ ပြောဆို ခဲ့မှု အပေါ်လည်း လှောင်ရယ်ခဲ့ကြ ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် အခုတော့ ဘယ်သူမှ မော်ရင်ဟို ပြောဆို ခဲ့တာတွေ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး မလှောင်ပြောင်နိုင်တော့ ပါဘူး ။ ဘာဖြစ်လို့ လည်း ဆိုတော့ မော်ရင်ဟို ပြောခဲ့တာတွေ ထဲက အတော်များများ ဟာ မှန်နေခဲ့လို့ ပါပဲ ။
၁ ။ ဒုတိယ နေရာနဲ့ ရာသီ ပိတ်သိမ်းနိုင်မှု ဟာ မဟာအောင်ပွဲ ဟုပြောဆိုခြင်း
အင်တာမီလန် နဲ့ ချန်ပီယံ လိဂ် အပါ အ၀င် တစ်ရာသီ အတွင်း ဖလား ၃ လုံး ၊ ပေါ်တို နဲ့ ချန်ပီယံ လိဂ် ၊ ချဲလ်ဆီး ကို ၂ ခါ ကိုင်တွယ်ပြီး အမှတ်ပေး ချန်ပီယံဆုတွေ ရယူပေး ခဲ့သူ တစ်ဦး က အမှတ်ပေး ဇယား ရဲ့ အဆင့် ၂ နေရာ နဲ့ ပိတ်သိမ်း နိုင်မှု ဟာ ကြီးမားတဲ့ အောင်ပွဲ လို့ ဆိုလာခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါကို ဘောလုံး ပရိသတ် တွေ ၊ ဝေဖန်သူတွေ က လှောင်ပြောင် အပြစ်တင် ခဲ့ကြ ပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် မော်ရင်ဟို ကတော့ သူ့ရဲ့ စကားဟာ မှန်ကန် တယ်ဆိုတာ ကို အပြည့်အ၀ ယုံကြည်ကြောင်း နဲ့ နောက်ကွယ် မှာ ဘာတွေ ဖြစ်ခဲ့တယ် ဆိုတာ ကို ဘယ်သူမှ မသိကြောင်း တုန့်ပြန်ပြောဆို ခဲ့ ပါတယ် ။ အခု အချိန် မှာတော့ ဒီလူတွေ နဲ့ အာဆင်နယ် ၊ လီဗာပူး ၊ စပါး ၊ ချဲလ်ဆီး တို့ရဲ့ အထက် မှာ ရပ်တည် နိုင်တဲ့ တာ ဟာ တကယ်ပြောင်မြောက်တဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ကို အားလုံး နီးပါး လက်ခံ သွားကြပြီဖြစ် ပါတယ် ။
၂ ။ တော်မီနေး ကို နေရာပေးခဲ့ခြင်း
သူ့ရဲ့ ဒုတိယ မြောက် ရာသီ မှာ မော်ရင်ဟို ဟာ အကယ် ဒမီ ကွင်းလယ် ကစား သမား တစ်ဦး ကို မိတ်ဆက် ပေးခဲ့ ပါတယ် ။ သူကတော့ မက် တော်မီနေး ပါ ။ လူငယ်တွေ ကို နေရာပေးလေ့ သိပ် မရှိတဲ့ မော်ရင်ဟို ဟာ တော်မီနေး ကို တော့ ပွဲ အတော်များများ ပွဲထွက် အသုံးပြု ခဲ့သလို ခြေစွမ်း မပြနိုင်တိုင်း လိုလို မှာလည်း ကာကွယ် ပေးခဲ့ ပါတယ် ။
မော်ရင်ဟို ဟာ တော်မီနေး ကို ၂၀၁၈ အတွက် အကောင်းဆုံး မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ကစား သမား ( သူ တစ်ဦးတည်း အမြင် ) အဖြစ် သတ်မှတ် ခဲ့သလို အနာဂါတ် မှာ လည်း ထွန်းတောက်မယ့်သူ အဖြစ် ပြောဆို ခဲ့ ပါတယ် ။ မော်ရင်ဟို မရှိတော့ ချိန် မှာတော့ တော်မီနေး ဟာ ယူနိုက်တက် ကွင်းလယ်ရဲ့ အားထားရတဲ့ ကစား သမား တစ်ဦး ဖြစ်လာ ခဲ့ပြီး ခြေစွမ်း မှာသာ မက ခေါင်းဆောင်မှု အပိုင်းမှာပါ အလားအလာ ကောင်းတွေ ရှိနေတဲ့ သူ တစ်ဦး အဖြစ် သိသာ မြင်သာ စေလာခဲ့ ပါတယ် ။
၃ ။ ရက်ဖိုဒ့် ဟာ အထောင်တိုက်စစ်မှုး မဟုတ်ဘူး
လူကာကူ ကို ပွဲထွက် ခွင့်တွေ ပေးနေ ခဲ့ပြီး ရက်ဖိုဒ့် ကို ခေါက်ထားတဲ့ အတွက် ယူနိုက်တက် ဂန္ထ၀င် တွေ နဲ့ ပရိသတ်တွေက မော်ရင်ဟို အပေါ် ဒေါသူပုန် ထခဲ့ကြ ပါတယ် ။ မော်ရင်ဟို နေရာကို ဆက်ခံ တဲ့ ဆိုးရှား က မားကပ် ရက်ဖိုဒ့် ဟာ သူ့ရဲ့ ဦးစားပေး ပွဲထွက် တိုက်စစ်မှုး ဖြစ်တယ်လို့ ကြေငြာ ခဲ့စဉ် မှာ ၀မ်းသာ ခဲ့တဲ့သူတွေ အများအပြား ရှိခဲ့ မှာပါ ။
ဒါပေမယ့် ဒီတစ်ခု မှာလည်း မော်ရင်ဟို မှန်ခဲ့ပြန် ပါတယ် ။ ရက်ဖိုဒ့် ဟာ နယူးကာဆယ် ကို ၁ – ၀ နဲ့ ရှုံးနိမ့် ခဲ့တဲ့ ပွဲမှာ ၂ ဖက် အသင်း ဂိုး သမားတွေ ထက်ပင် ဘောလုံး ထိတွေ့မှု အကြိမ် နည်းခဲ့ ပါတယ် ။ လျှင်မြန်တဲ့ ပြေးနှုန်း တစ်ခု သာ ပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့ မားကပ် ရက်ဖိုဒ့် ဟာ အထောင်တိုက်စစ်မှုး ဖြစ်ဖို့ သင်ယူ စရာတွေ လိုအပ် နေသေးတယ် ဆိုတာ ထက် အထောင်တိုက်စစ်မှုး တစ်ဦး ဖြစ်ဖို့ မသင့်တော်ဘူးဆိုတဲ့ အတွေးတွေ ကို ယူနိုက်တက် ပရိသတ်တွေ စတင် ခံစားမိလာခဲ့ပါပြီ ။
၄ ။ ပါရဲရား အပေါ် ဝေဖန်ခြင်း
ယူနိုက်တက် နည်းပြ ဖြစ်လာချိန် မှာ ဆိုးရှား လုပ်ပေး ရမယ့် တာဝန် ၂ ခု ရှိ ပါတယ် ။ တစ်ခု က တစ်ချိန်တုန်းက အောင်မြင် ခဲ့တဲ့ တိုက်စစ် အသားပေး ကစားပုံ ကို ပြန်လည် ဖော်ဆောင်ဖို့ နဲ့ ဆာအဲလက်စ် တုန်းကလို လူငယ်တွေ ကို နေရာပေးဖို့ပါ ။ ဒီ အတွက် ဆိုးရှား ရွေးချယ် ခဲ့တဲ့ သူတွေ ထဲ မှာ ဘရာဇီး ကွင်းလယ်လူ အန်ဒရေ ပါရဲရား ပါဝင် ခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် မော်ရင်ဟို ကတော့ ပါရဲရား ကို သဘောမတွေ့ခဲ့ ပါဘူး ။
ဘရာဇီးသားလေး ဟာ မော်ရင်ဟို ရဲ့ ပထမဆုံး ၂ ရာသီ မှာ ဂရန်နာဒါ ၊ ဗလင်စီယာ အသင်းတွေ ဆီ အငှား ထွက် ကစားခဲ့ရ ပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် ပါရဲရား ဟာ ယူနိုက်တက် မှ ယူနိုက်တက် ဆိုတဲ့ စိတ်ဓါတ် နဲ့ ခံယူချက်မျိုး ရှိမနေကြောင်း လည်း မော်ရင်ဟို က ဝေဖန်ခဲ့ သလို သူတောင်းဆို နေတဲ့ ပွဲထွက်ခွင့် နဲ့လည်း ထိုက်တန် မှု မရှိဘူးလို့ ပြောဆို ခဲ့ ပါတယ် ။ ပရိသတ်တွေ က တော့ ပါရဲရား . . . ပါရဲရား နဲ့ အော်ဟစ် နေခဲ့ ပါတယ် ။ အခု တော့ ဒီအသံတွေ တိတ်သွားခဲ့ ပါပြီ ။
၅ ။ ပေါ့ဘာ ဟာ ယုံကြည်ကိုးစားရတဲ့ သူ မဟုတ် ၊ သူဟာ “Virus” ဖြစ်တယ်
ဆောက်သမ်တန် နဲ့ သရေကျ ခဲ့တဲ့ ပွဲ ဟာ မော်ရင်ဟို ယူနိုက်တက် ကို မစွန့်ခွာခွင် ရက် အနည်းငယ် အလို မှာ ဖြစ်ခဲ့ တာပါ ။ ဒီပွဲ အပြီးမှာ ကွင်းလယ်လူ ပေါလ် ပေါ့ဘာ ကို ဗိုင်းရပ်စ် တစ်ကောင် ဖြစ်ပြီး အနီးအနားက လူတွေကို ကူးစက်စေတတ် သူ လို့ မော်ရင်ဟို သုံးနှုန်း ဝေဖန် ခဲ့ ပါတယ် ။ အသင်း အတွင်း မှာ ပေါ့ဘာ – မော်ရင်ဟို အားပြိုင်မှုတွေ ကြီးထွား လာခဲ့ပြီး ကလပ် ဘက်က ပေါ့ဘာ ကို ရွေးချယ် ကာ မော်ရင်ဟို ကို ထုတ်ပယ် ခဲ့ ပါတယ် ။ အခု သူတို့ မှားသွားမှန်း သဘောပေါက် နေလောက် ပါပြီ ။
ပြင်သစ် ကစား သမား ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ နွေရာသီ တုန်းက ရီးရဲ မက်ဒရစ် နဲ့ သတင်း အကြီးအကျယ် ထွက်ခဲ့ပြီး တရားဝင် ဖွင့်ဟ ပြောမသွားလင့်ကစား အေးဂျင့် နဲ့ မိသားစုဝင်တွေ ရဲ့ လုပ်ရပ်တွေ ကို ကြည့်ခြင်း အားဖြင့် ပေါ့ဘာ ဟာ ရီးရဲ ကို ပြောင်းချင်နေခဲ့တာ ကို သိသာ စေခဲ့ ပါတယ် ။ ဒီရာသီ မှာ လည်း အဖွင့် ပွဲစဉ် မှာ သာ ပုံစံ ကောင်း ရခဲ့ပြီး ကျန်တဲ့ ပွဲတွေ မှာ ပေါ့ဘာ ဆီက ပေါ့ဘာ ဆန်တဲ့ ခြေစွမ်းတွေ ကို မမြင်တွေ့ခဲ့ရ ပါဘူး ။
လက်ရှိ အချိန် မှာတော့ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ဟာ အဆင့် ၁၂ ကို ရောက်နေပြီး ဒါဟာ ကမ္ဘာ့ ဖလား ချန်ပီယံ အသင်းသား တစ်ယောက် အတွက် အသင်းပြောင်းခွင့် တောင်းခံ ဖို့ လုံလောက်တဲ့ အချက် ဖြစ်လာ နိုင် ပါတယ် ။ ဒီလိုတွေ ဖြစ်လာအောင် ပေါ့ဘာ ကြံစည်ခဲ့သလား ဆိုတာ သူကိုယ်တိုင်ပဲ သိနိုင် မှာပါ ။ သေချာတာ ကတော့ မော်ရင်ဟို မှန်ခဲ့ပြန် တာပါပဲ ။
၆ ။ ခံစစ်ကို ထောက်ပြခဲ့ခြင်း
ကမ္ဘာ့ အဆင့် ခံစစ် သမား တစ်ဦး ကို ခေါ်ယူ ပေးဖို့ ဒုတိယ မြောက် ရာသီ အကုန်မှာ မော်ရင်ဟို တောင်းဆို ခဲ့ ပါတယ် ။ နွေရာသီ တစ်လျောက်လုံး အယ်ဒါဝီရယ် ၊ ကူလီဘာလေ ၊ မက်ဂွဲယား ၊ ဘိုတန် ၊ စကရီနီယာ စတဲ့ နာမည်ကျော်တွေ နဲ့ သတင်းထွက် ခဲ့ပြီး တစ်ယောက် မှ ရောက်မလာခဲ့ ပါဘူး ။ မော်ရင်ဟို လက်ထက် ယူနိုက်တက် အသင်းမှာ ဂျုံးစ် ၊ ဘိုင်လီ ၊ စမောလင်း ၊ ရိုဟို ၊ လင်ဒီလော့ဖ် တို့ ဟာ ခံစစ်မှုး ၂ နေရာ အတွက် အရွေးခံခဲ့ရ ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် လင်ဒီလော့ဖ် က လွဲရင် မော်ရင်ဟို စိတ်တိုင်းကျသူ မရှိခဲ့ ပါဘူး ။
ဒီရာသီမှာတော့ မော်ရင်ဟို အသည်းအသန် တောင်းဆိုခဲ့တဲ့ စာရင်း ထဲ က ဟယ်ရီ မက်ဂွဲယား ကို ယူနိုက်တက် တို့ ခေါ်ယူ ပေးခဲ့သလို ပဲလေ့စ် နောက်ခံလူ ဘစ်ဆာကာ ကို လည်း ခေါ်ယူ ပေးခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ခံစစ် ကစားပုံ ကောင်းတဲ့ နည်းပြ မရှိတော့တဲ့ နောက်မှာတော့ ယူနိုက်တက် ရဲ့ ခံစစ် ဟာ အမှား အယွင်း တွေ နဲ့ ဂိုးတွေ ပေးနေခဲ့ရ ပါတယ် ။ ဒီ နောက်တန်းနဲ့ သာ မော်ရင်ဟို ကို ပေးကိုင်လိုက်ရင် ဆိုတဲ့ အတွေးတွေ လည်း ၀င်နေ သူတွေ ရှိနေ မှာ ပါ ။
၇ ။ ဆိုးရှား ဟာ ရုပ်သေးရုပ် လို့ ပြောဆိုခဲ့ခြင်း
“ကျွန်တော် က သဘောကောင်းတဲ့ နည်းပြ မဖြစ်ချင် ပါဘူး ။ သဘောကောင်းတဲ့ သူ ဟာ ကြိုးဆွဲ ခံရတတ် ပါတယ်” ဆိုတဲ့ စကား ဟာ မော်ရင်ဟို လက်ထဲ ကနေ ယူနိုက်တက် ကို လွှဲယူ ခဲ့တဲ့ ဆိုးရှား တစ်ယောက် အစ ကောင်းခဲ့ ပေမယ့် နောက်ဆုံး ၁၀ ပွဲ မှာ ၆ ပွဲထိ ရှုံးနိမ့်ကာ အဆင့် ၇ နဲ့ ရာသီ ပိတ်သိမ်း အပြီး မှာ ပြောဆို ခဲ့တဲ့ စကား ဖြစ် ပါတယ် ။
ဆိုးရှား ဟာ ယူနိုက်တက် ပရိသတ်တွေ အတွက် ကယ်တင်ရှင် တစ်ဦး ၊ အသင်းရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ နဲ့ နှလုံး ၀ိဥာဉ် တွေ ကို သိနားလည် တဲ့ ဂန္ထ၀င် တစ်ဦး ၊ တစ်ချိန်တုန်းက အောင်မြင်မှု တွေ နဲ့ လူငယ် စီမံကိန်းတွေ ကို ဖော်ဆောင်ပေး မယ့်သူ တစ်ဦး အဖြစ် ထင်ခဲ့ ပေမယ့် တကယ်တန်း မှာတော့ ဆိုးရှား ဟာ အသင်း အမှုဆောင် အက်ဝုဒ်ဝက် ရဲ့ ကြိုးဆွဲရာ ကရတဲ့ ရုပ်သေး ရုပ်တစ်ခု လို ဖြစ်နေ ခဲ့ ပါတယ် ။
ဒါကို ဆိုးရှား ကိုယ်တိုင် ၀န်ခံမှာ မဟုတ်ပေမယ့် အသင်း က သူ့အပေါ် လုပ်ဆောင် ပေးခဲ့တာတွေ ၊ သူ့ အပေါ် ပြောဆို ကာကွယ် ပေးနေတာ တွေ ၊ ဆိုးရှား ရဲ့ ပွဲအပြီး ပြောစကားတွေ ကို ပြန်ပြီး သုံးသပ်ကြည့်မယ် ဆိုရင် သဘောကောင်းတဲ့ နော်ဝေသား ဟာ ကစား သမား တွေ ကို မလွှမ်းမိုး နိုင်သလို ဘုတ်အဖွဲ့ နဲ့ အမှုဆောင် တို့ ကို လည်း ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ပြောဆို နိုင်ခြင်း မရှိ လောက်တာကို ရိပ်စားမိ နိုင် ပါတယ် ။ ဒီတစ်ခု ကလည်း မော်ရင်ဟို မှန်ခဲ့ ပြန်တာပါပဲ ။
နိုင်ငံ တကာ ပွဲစဉ်တွေ အပြီး မှာတော့ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ဟာ လီဗာပူး နဲ့ ရင်ဆိုင် ရမှာပါ ။ ဒီရာသီ မှာ ၈ ပွဲ ကစား ၊ ၈ ပွဲလုံး နိုင်ထားတဲ့ လီဗာပူး ကို အပြတ် အသတ် ရှုံးနိမ့် မယ်လို့ အတော် များများက တွေးထင် ယုံကြည် ထားကြပါပြီ ။ မနှစ်တုန်းက လီဗာပူး ကို ရှုံးပြီး မော်ရင်ဟို ထုတ်ခံ ခဲ့ရသလို ဒီနှစ် မှာလည်း ဆိုးရှား ထုတ်ခံ ရမယ်လို့ ရေပန်း စားနေခဲ့ပြန် ပါပြီ ။
မော်ရင်ဟို ကတော့ မချိပြုံး ပဲ ပြုံး နေမလား ၊ အိမ်က တီဗွီ ကို ကြည့်ပြီး ၀မ်းနည်းနေ မလား ၊ လှောင်ရယ် နေမလား ဆိုတာတော့ သူကိုယ်တိုင်ပဲ သိနိုင် မှာပါ . . .